Madaxweynah DFS Xasan Shiikh Maxamuud oo ka codsaday shacabka Muqdisho in ay ka qayb qaataan adkaynta amaanka iyadoo uu soo aadanyahay shir-weynaha IGAD - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynah DFS Xasan Shiikh Maxamuud oo ka codsaday shacabka Muqdisho in ay ka qayb qaataan adkaynta amaanka iyadoo uu soo aadanyahay shir-weynaha IGAD
September 10, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Madaxweynaha DFS Xasan Shiikh Maxamuud oo ka hadlay amaanka Muqdisho oo la adkeeyay. Sawirka: Villa Somalia.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ka hadlay tallaabooyin amniga lagu sugayo oo ay qaadeen haayadaha amaanka iyadoo amaanka Muqdisho aad loo adkeeyay.
Xasan Shiikh ayaa dadka shacabka ah ka codsaday in ay la shaqeeyaan haayadaha amaanka ayna u dulqaataan tallaabooyinka dheeriga ee lagu sugayo amaanka caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo la filayo in dhawaan Muqdisho lagu qabto shir madaxeedka urur goboleedka IGAD.
Hoggaamiyaasha Itoobiya, Jabuuti, Kenya, Koonfurta Suudaan, Uganda iyo Waqooyiga Suudaan ayaa la filayaa in ay kasoo qaybgalaan shir-weynaha IGAD waxayna ka wadahadli doonaan xaalada guud ee gobolka.
Dhanka kale, Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa ka hadlay arrimaha shirka hoggaamiyaasha siyaasada Soomaalida oo wali Muqdisho ka socda, Madaxweynaha ayaa sheegay in shirkaas uu si wanaagsan u socdo dhawaana lasoo gabagabayn doono.